Wararkii:: Jan 28, 2007
Dagaal Faraha Lagaga Gubtay Oo Dhex Maray Kooxo Hubaysan Iyo Ciidamada Booliska Dowlada Kmg Ah.
Mudaaharaad looga soo horjeedo magacaabista maamula cusub ee Shabeellada Dhexe oo ka dhacay Degmada Jowhar
Cabdulaahi Yuusuf: La hadalka Shiikh Shariif waxay u taalaa labada Gole..
Ciidamadii Itoobiya ee ku sugna Dhoobley oo halkaas isaga baxay..
Weerar xalay loo gaystay saldhiga Booliiska Degmada Howlwadaag..
Dadweynaha Muqdisho oo aad uga walwalsan Xaaladda Nabadgelyo ee Muqdisho.
Cashuuraa waxay ku beegan tahay Isniinta, Jan 29, 2007
maalinta Cashuura waxay ku beegan tahay Isniinta, Axada waxaa ku beegan maalinta sagaalaad... Akhri...
Axad, Jan 28, 2007: Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay Ex kantarool ee degmada yaaqshiid ,dagaalkan ayaa u dhexeeyey kooxo hubaysan iyo ciidamada booliska dowlada kmg ah ,iyadoo 2 qof ay ku geeriyootay 5 kalena ku dhaawacantay inta la ogyahay.
5ta ruux ee dhaawacantay ayaa waxa ay ahaayeen dad rayid ah oo qaarkood xabadaha ay si habow ah ugu tageen iyagoo ku sugan guryahooda , ka dib markii dagaalku uu saacado Qaatay islamarkana uu ku faafay xaafadaha ku dhow dhow degaankaas ,sidoo kalena labada qof ee ku dhimatay dagaalkan ayaa mid kamida ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska dolwada kmg ah, halka qofka kalena uu ahaa qof rayida oo xabadi ugu tagtay si habow ah .
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen inay mid kamida labada qof ee dhimatay oo ahaa askari boolis ah uu maydkiisa lagu jiid jiiday wadada dheer ee isku xirta ex-kaantarool iyo suuqa xoolaha islamarkaana uu yaalay wadada kadibna ay ku soo xoomeen dad aad u tiro badan oo ku qaylinayey halku dhegyo ka dhan ah dowlada kmg ah , waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamada booliska ay iskaga carareen agagaarka Ex kantarool oo ahayd meesha dirirtu ka dhacday .
Dadkii ku dhaawacmay dagaalkaas ayaa waxaa loola cararay qaarkood Isbitaalada magaalada muqdisho ,sidoo kalena ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda KMG ah oo ka hadlaya sababaha dagaalkan.
Si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa 24 kii saac ee la soo dhaafay waxaa la dhigay Isbitalada magaalada Muqdisho in kabadan 13 ruux oo siyaabo kala duwan ugu soo dhaawacmay Qaraxyo iyo rasaasta ka dhacaysa magaalada Muqdisho sida uu saxaafada u sheegay Dr, Daahir Dheere oo madax ka ah qaybta caafimaadka isbitaalka madiino.
Wararka caawa oo Isniin soo geleyso ka imanaya muqdisho ayaa sheegay in weerar lagu qaaday saldhiga booliska ee degmada Yaaqshiid. Taas oo ka dambeysey Habeenimadii Axadii oo weeraro lala beegsaday saldhigyada booliska ee Wardhiigley iyo hawlwadaag.
World scared of Somalia, no peacekeeping in sight
Cumar Xaashi Aadan �Baarlamaanku Xor Maaha ,waxaana lagu Ilaaliyaa Taangi Amxaaro leedahay..
Xildhibaan Cumar Xaashi Aadan oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada ah ee ku siyaasada noqday guddoomiyihii baarlamaanka KMG Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo iminka ku sugan magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka hadlay aragtisiida ku aadan marxalada siyaasadeed ee caasimada Muqdisho ay ku sugan tahay islamrkaana ku tilmaamay inay la mid tahay sidii 1991-dii oo ay magalaadu aheyd mid kacsan.
�Magaalada Muqdisho waxay haatan xaaladeedu maraysaa sidii 1991-dii oo guryaha inta dadka lagala boxo waddooyinka lagu Toogan jiray� ayuu yiri Cumar Xaashi oo intaasi ku daray in wararka ay maalin walba kala socdaan warbaahinta ay aad uga naxaan wuxuuna dhinaca kale, xusay in dalka Soomaaliya ay imaan doonaan marka ay ka baxaan Taangiyada Ethiopia.
Cumar xaashi ayaa sidoo kale intaas ku daray �Baarlamaanka dowladda kmg ahi ma ahan mid xor ah, waxaana lagu ilaaliyaa Taangi Amxaaro leedahay, oo weliba cabsi gelina ay u dheer tahay, si ay u fuliyaan go�aanada laga doonayo markaas, waxaadse ogaan doontaan markii ay Amxaaradu ka baxdo dalka ,xildhibaano badan oo sheegi doona waxa lagu sameeyey iyo waxa ay sameeyeen sababta ku kalifay, waxaana jira xildhibaano badan oo nagu fikir ah�.
Dhinaca kale, xildhibaan Cumar Xaashi ayaa ka hadlay xil ka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan isagoo sheegay in uusan la yaabin markii uu maqlay isagoo sheegay in markii horeba ay dowladda Ethiopia xilkaasi la dooneysay dad gaara oo kamida xildhibaanada oo kasoo jeeda gobolka baay .
Saldhigyada Howlwadaag iyo Wardhiigley oo xalay kooxo aan la garanayn ay weerar ku qaadeen
Calankii ay ciidamada Itoobiy akusoo bandhigeen garoonka xerada Afisyoone Jan 23, 2007, calankaas oo ah kii hore ee Itoobiya, kaas oo ka duwan calanka cusub ee ay Itoobiya samaysay ee xiddigta dhexda ku leh.... Sawirka: Reuteres.
Saldhigyada booliiska ee Degmooyinka Wardhiigley iyo Howlwadaag ayaa xalay lala beegsaday ayaa sababay khasaare dhaawac u badan oo gaaray booliiska iyo dad ku dhowaa saldhigyada xilligii ay qaraxyada dhacayeen, mana jiraan cid ku dhimatay qaraxyadaas iyo cid sheegatay toona.
Baasuukayaal ayaa lala beegsaday bartamaha saldhigyadaas, iyadoo gawaari ay saaran yihiin kooxo aan la garanayn laga riday baasuukayaasha lala beegsaday saldhigyada.
Dad ku sugnaa xiliga ay qaraaxyada dhacayeen agagaarka Saldhigga degmada howlwadaag ayaa sheegay inay arkeen dhaawacyada dhowr ruux oo ay ka mid ahaayeen ciidammada Booliiska, waxaana la sheegay in loola cararay isbitaallo si loogu daweeyo inkastoo dhaawacyadooda la sheegay inay ahaayeen kuwo fudud.
Dhanka kale, Saldhigga Degmada wardhiigley ayaa iyadana waaa ku dhaawacmay dhowr ruux oo la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidammada Booliiska Soomaaliyeed.
Qaraxyadaan ayaa ku soo beegmay xilli ay billaabeen booliiska Gobolka Banaadir inay nabadda Magaalada Muqdisho sugaan.
Degmada Jowhar ee Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka dhacay mudaaharaad looga soo horjeedo magacaabista maamulka cusub ee dowladda Federaalka ay u magacowday Gobolka Shabeellada dhexe.
Mudaaharaadkaan oo ay dhigeen qowmiyadda beelaha Jareer weyne, waxaana ay sheegeen dadkaan isku soo baxay inaysan ku qanacsanayn qaabka loo magacabaay maamulka cusub, waxayna sheegeen in ay ahayd in dadka deegaanka lagala tashado maamulka uu yeelanayo gobolka Shabeellada Dhexe.
Mudaaharaadkaan ayaa waxay kaga cabanayeen dadka deegaankaas maamulka cusub waxayna sheegeen inay iyaga xaq u leeyihiin in laga lagala tashado cidda maamulaysa gobolkooda.
Mudaaharaadkaan oo socdya muddo saacado ah ayaa ku soo beegmay iyadoo lagu wado in maanta uu wareejiyo maamulka Gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Dheere, isla markaana ay maanta la wareegayaan maamulka Shabeellada Dhexe maamulka cusub ee loo magacaabay Gobolkaas.
Maxamed Dheere: �Maamulka Cusub ee loo soo magacaabay Shabeellada Dhexe waan la shaqeynayaa�
Guddoomiyihii hore ee Shabeellada Dhexe Maxamed Dheere ayaa shaaca ka qaaday inuu ku wareejinayo maamulka cusub Gobolka Shabeellada Dhexe oo dowladdu ay u magacowday shalay gobolkaas.
Maxamed Dheere oo ku sugan Jowhar ayaa ka sheegay Jowhar inuu maamulka cusub ku wareejinayo maamulka Shabeellada Shabeellada dhexe isla markaana uu la shaqeynayo.
Guddoomiyihiin Shabeellada Dhexe ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aaddan maamulka cusub ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay isla markaana uu ku wareejinayo maamulka cusub ee loo magacaabay isla markaana uu la shaqeynayo.
�Waxaan diyaar u ahay horayna aan u sheegay inaan ku wareejinayo cid walba oo loo soo magacaabo Gobolka Shabeellada Dhexe, isla markaana waxaan caddeynayaa inaan la shaqeynayo maamulka Cusub� ayuu yiri Maxamed Dheere oo hadalkiisa uu u muuqday mid ku qanacsan magacaabidda maamulkaas cusub.
Ra�iisul wasaaraha Ethiopia: �Ciidammadayda gabi ahaantood waan kala baxayaa gudaha Soomaaliya�
Miles Zenawi oo ah Ra�iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay isagoo warbixin siinayay wakaaladaha wararka calaamka inuu kala baxayo ciidammada dalkiisa ee ku sugan Soomaaliya saddex meelood laba meel.
Atto Miles Zenawi ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidammadiisa ee Soomaaliya ay tahay go�aan ay dowladdiisu isku raacday, sidoo kalena ay ku doonayaan inay kaga baxaan gudaha Soomaaliya maadaama ay ku guulaysteen howlgalkii kallifay inay gudaha Soomaaliya galaan.
�Waxaan ka gaarnay guulo la taaban karo sababihii aan u galnay gudaha Soomaaliya oo ahayd inaan ka hortagno argagaxiso halkaas ku kobci lahayd, waana taas middaan u galnay, haddana waxaan go�aan ku gaarnay inaan ka baxno Somalia� ayuu yiri Ra�iisul Wasaaraha Ethipoia Miles Zenawi.
Ciidammada Ethiopia ayaa waxay soo galeen gudaha Soomaaliya iyagoo garab siinaya dowladda Federaalka Soomaaliya oo markaas dagaal xooggan kula jiray Maxkamadihii la eryay.
Habeenkii xalay ayaa weerar isugu jiray qarax iyo rasaas waxaa lala beegsaday saldhiga Degmada Hawl-Wadaag oo la sheegay in ay ku sugnaayeen ciidamda Booliiska Dowladda Federaalka, waxaana weerarkaasi la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen labo qofood oo ciidanka Booliiska ah, iyadoo kooxdii weerarka gaysatayna ay markiiba halkaasi isaga dhaqaaqeen.
Waxaa maalmahan Muqdisho ka socday qaraxyo lala beegsanayo xarumaha ay ku sugan yihiin Ciidamada Itoobiya oo ay ugu dambeysay weerarkii lala beegsaday xero ciidamada Itoobiya ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka Darmooley, ilaa iyo haddana lama garanayo qasaarihii uu gaystay weerarkaasi, sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho lagu daadiyey waraaqo dadka looga digayo in ay la shaqeeyaan ciidamada Itoobiya.
Warar kale ayaa tibaaxay in xalay oo Axad soo geleysey weerar kale lagu qaaday saldhigga booliska ee degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqata meel ammaankeedu uu faraha ka si baxayo. Habeen hore ayey ahayd markii qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen deegaanka Ceel-carfiid ee Waqooyiga caasimada .
Ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Dhoobley kuwaas oo ka deganaa deegaankaasi saddex goobood ayaa shalay aroortii halkaas isaga soo baxay, iyadoo la sheegay in ay u soo kicitimeen dhinacaa iyo magaalada Kismaayo.
Ciidamada Itoobiya oo halkaas ugu sugnaa sidii ay u baabi�in lahaayeen wixii ka haray Maxaakiimta Islaamiga ah ayaa la garaneyn sababta keentay in ciidamadaasi halkaasi ka soo baxaan, iyadoo deeganadaasi ay ku sugan yihiin Maxaakiimta Islamiga ah.
Ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee deeganadaasi ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey dadweynaha Deegaanka oo iyagu dhibaato ku qabay Ciidamada Itoobiya oo iyagu mar kasta koontarool ku hayey deegaanadaasi.
Dhawaan ayaa Ra�isul Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi waxa uu daboolka ka qaaday in uu ciidamadiisa kala soo baxayo gudaha dalka Soomaaliya, hase yeeshee Ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in ay sugayaan ciidamada nabad ilaalinta ah ee ka socda Midowga Afrika, qaar ka mid ah Dowldihii horey u ogolaaday in ay Soomaliya u soo diraan ciidamo ayaa haatan waxay daboolka ka qaadeen in aysan Soomaaliya u soo diri doonin ciidamo nabad ilaalin ah, waxayna intooda badan soo jeediyeen in marka hore meel la saaro qarashka ciidmada.
Iyadoo todobaadkii la soo dhaafay Magaalada Muqdisho lagu dilay ilaa iyo dad gaaraya 20 qofood, kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay ayaa haddan waxaa Magaalada ka socda qaraxyo lala beegsanayo xarumaha Dowladda iyo goobaha kale oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya.
Sidoo kale Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda Federalka ayaa iyana bilaabay in ay guryaha kala baxaan dadka rayidka ah kaddib markii loogu soo marmarsiyoodo arrimo la xiriira dhinaca tuhunka.
Magaalada Muqdisho ayaa dadweynaha waxaa soo food saaray walwalkii ugu balaarnaa kadib markii magaalada ay ku soo bateen dilala fara badan, waxayna dadweynaha qaarkood ka codsadeen Dowladda in ay arimahaasi wax ka qabato, ama ay heshiis la gaarto kooxaha dagaalada wada.
Nin odey ah ayaa waxa uu yiri mar aan la kulmay �Waa xaaladdii ugu xumeyd ee soo marta Soomaaliya xiligaan, waayo markii hore waxay ahayd hal waji, maantase wa labo waji oo mid waliba uu doonayo in uu ka dhex muuqdo�.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah bulshada ayaa waxay wadaan olole ay ku sugayaan ammaanka deeganadooda si ay uga hor tagaan kooxaha doonaya in ay nabdda burburiyaan.
Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf Axmed oo ku suganaa dalka Liibiya kana qaybgalayey shirkii Sab Saxara, kuna soo jeedey dalka Itoobiya si uu uga qaybgalo kulan madaxeedka Midowga Afrika ayaa wax laga weydiiyey bal ay wada hadal la furayaan Golaha Maxaakiimta Islaamiga ah oo uu horkacayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxa uuna sheegay C/llaahi Yuusuf Axmed in Dowladda Federaalka ay markii hore ku dhisneyd dib u heshiisiin, isla markaana ay diyaar u tahay in ay wada hadal la furto cid kasta oo ay ku jirto maslaxadda Ummadda Soomaaliyeed, sida Bulshada Rayidka ah, Culima�udiinka iyo Odoyaasha Dhaqanka.
C/llaahi Yuusuf waxa la weydiiyey hadalkii dhawaan ka soo yeeray Dowladda Mareykanka ee sheegayey in dalka Soomaaliya loo dhisayo dowlad Sal balaaran, waxa uuna C/llaahi Yuusuf uu sheegay in Dowladda Federaalka ay markii horeba ku dhisneyd mid sal balaaran, waxa uuna sheegay in Dowladdu ay ka soo horjeedo in faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Waxaa la weydiiyey Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed in ay wada hadal la furayaan Guddoomiyaha Guddiga fulinta Maxaakiimta Islaamiga Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uuna sheegay in la kulanka iyo wada hadalka Sheekh Shariif ay ku xiran tahay labada Gole ee Dowladda ee Golaha Wasiirada iyo Golaha Baarlamaanka.
Wararkii Shalay Galab:: Jan 27, 2007
GO'AAN AY SOO SAARTAY BEESHA SACAD EE KU NOOL WADANKA SWEDEN
Suldaanka Beesha Cayr oo dowladda Federaalka iyo Beelaha Soomaaliyeed codsi uu soo jeediyay
Maxaabiis Indhaha ,Gacmaha Iyo Weliba Madaxa Laga Xiray Oo Laga Soo Rogay Garoonka Muqdisho.
Ra�iisul wasaare Geeddi oo maanta u magacaabay Shabeellada Dhexe Maamul cusub
Agaasimaha waaxda Socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo maanta soo bandhigtay Baasaboorada Cusub ee Soomaaliya
Dowlada Jabuuti oo Sheegtey in ay Taageero Weyn u Heyso Ciidamada Nabad Ilaalinta Ee la Gaynayo Gayiga Somalia.
Beesha Reer Mataan oo maanta kulan la qaadatay Wasiirka Arrimaha Gudaha Xuseen Maxamed Caydiid
Ismaaciil Buubaa: �Dalalka Dunida waxay go�aan ku gaareen inay taageeraan Soomaaliya�
Mareykanka oo dowladda Soomaaliya ka codsaday inuu la shaqeeyaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Magaalada Minyaabolis ee dalka mareeykanka ayaa xalay oo ay bishu ahayd 01/26/07 lagu qabtay munaasabad balaaran�
.Maher oo Canada ka aqbalay Cududaar iyo $10.5 million
.USA iyo EU oo doonaya in Soomaaliya loo dhiso Dowlad..
.Beesha Cayr oo Cabdulaahi Yuusuf ku tilmaamey...
.Askar Maraykan ah oo la sheegay in lagu haysto Koofurta
.Yuusuf Ashari oo sheegay in intii lala Xaajoon lahaa Sheikh
.Qoomiyadda Digil oo u soo jeedisay DFKMG in ay wada hadal
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Jan 27